Warmly Welcome: အတွေးတွေ ဆန့်ထုတ်ချင်တယ်
အွန်လိုင်းဘော်ဒါတွေကို သတိရတယ်ဆိုတော့ ကားဝိုင်းတွန်းခိုင်းဖို့ထင်ပါ့ အနော် အားမကောင်းဘူး ၀ါးတီးဆိုရင်တော့ စိတ်ဝင်စားသား ဒါနဲ့ လမ်းမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ အကူညီတောင်းမကြည့်ဘူးလား ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆို၇င်တော့ အနီရောင်ဂျစ်ကားလေးနဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်
ဟန်းဖုန်းလေးပြောနေရင်း ဆင်းလား “ဘာကူညီပေးရမလဲ ရှဉ့်” အဲ့လို အဲ့လို ဇတ်လမ်းမျိုးတွေ ရှိတတ်တယ်လို့း) ရုပ်ရှင်ဇတ်လမ်းရေးမလိူ့ လိုက်စိတ်ကူးနေတာ ။ အွန်လိုင်းမှာ စမနှုတ်ဆက်တာ မာနကြီးတာမဟုတ်တဲ့ ကျနော်ကတော့ အစ်ကို့ကိုတွေ့ကိုမတွေ့တော့ဘူး လေသံမာလို့ Block ပေးလိုက်ပြီထင်ပါ့ :P
နောက်နောင် သတိထားရမှာပေါ့လေ..... ပင်ပန်းသွားပြီပေါ့နော်။ ဆီလိုရင် လာယူနော်...မီးမီးတို့ အုပ်င်္ကြးဆီမှာ များကြီးရှိတယ်(ဟီး)
ကျွန်တော်လည်း ခရီးသွားနေလို့ မရောက်ဖြစ်ဘူး။
အာရုံတွေ များနေတော့ တစ်ခါတလေ ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ ကားတွန်းရတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီတာပေါ့နော်။ ဆက်ရန်ရောက်ရင် လက်တို့အုန်း။
အတွေးတွေနောက် တကောက်ကောက် လိုက်ကြည့်မိတယ်။ ပန်းရောင်မိန်းကလေးက ဘူလေးလဲဟင် .. မှန်မှန်ပြောနော်...
ခရီးဆိုတာ နီးနီးဝေးဝေး တစ်ယောက်ထဲ သွားတာတော့ အန္တရာယ်များပါတယ်။ လူသူ မနီးတဲ့ နေရာမှာသာ ကားပျက်ရင် ဆိုတဲ့ ပြင်ဆင်မှုမျိုးတော့ ထားသင့်တယ်တင်ပါတယ်။ ဆရာလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆင်ခြင်နိုင်အောင်ပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
ွ Gtalk စည်းကမ်းလေး မှတ်သွားတယ်
တခါတလေကျ တော့ သူခေါ်ချင် ချင် မခေါ်ချင်ချင် အတင်းခေါ် ဖြစ်တာတွေ ရှိတယ်..း)
ကားတွန်းခဲ့ရတာတော့.. သနားမိရဲ့ ..း)...
၀မ်းသာတယ်နော်။ နောက်ဆို သတိထားပေါ့။
အင်ဂျင်နီယာကြီးကားပျက်တယ်ဆို တာဒါမျိုးပေါ့ကို ၀င်းဇော်... နောက်ဆုံးဆီကုန်တာလေ ဟီး၂ အဲဒီပုံပြငိကိုသတိရတယ်..
ဟုတ်တယ် (flower.poem) ရေ ..
ကိုယ်၌ကလည်း စိတ်ကယောက်ကယက် ဖြစ်နေတယ်လေ။ အိမ်ပြန်ချင် စိတ်စော တာရယ်။ မထင်မှတ်တဲ့ ပျော်စရာတွေကလည်း ရလိုက် မရလိုက် ဖြစ်နေလို့ လေ၊ ကွန်မင့်တွေ အတွက် ကျေးဇူးပါ၊ အားလုံးပါပဲ ...............
Great ---)))))) ..
ပျော်ရွှင်စရာတွေ ရောက်လာတော့မှာပါ ..
မမှီလိုက်ဘူးဆိုတာကိုအားနာနာ နဲ့ လာပြောတာပါ
မရှိဘူးလို့ပဲ ငြင်းမှာ မဟုတ်လား။
သင်္ကြန်ကျရင် ဘယ်သွားမလဲ ကြိုပြောအုန်း
nyartarthu နဲ့အင်ဗွိုက်ထားတာ အိုကေလည်းပေးဘူး
အကြွေးစနစ်နဲ့ ပညာပြတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုဆပ်တာလည်းဟင်။
ကားပျက်တာများမပြောဘူး မီးခြစ်လေး ပို့ပေးမှာပေါ့
ဆောရီးပါ nyartarthu ကို (my diary) မှန်းမသိလို့ no ပေးလိုက်မိပါတယ်။ ပြန် add လိုက်ပါမယ်။ တစ်မျိုးတော့ မထင်စေချင်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေကို အားလုံးခင်တယ်၊ တန်းတူ ခင်တယ်။ အချိန်မပေးနိုင်လို့ ချက်မတက်နိုင်တာ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။
သယ်ချင်းရဲ့ ကွန်မင့်တွေ အတွက် ကျေးဇူးပါနော်
လောကီသားပေမို့ အမြဲတော့ အဆင်မပြေ နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ စက်တောင် ပျက်ချိန်တန် ပျက်သေးတာပဲ လူလည်းပဲ ခံနိုင်ရိုးလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေ တယ်ဆိုရင်ပဲ စိတ်ချမ်းသာရတာပေါ့။ နောက်တော့ သတိထားပေါ့။ သတိဆိုတာ ပိုတယ်လို့တော့ မရှိပါဘူး၊ အလိုချည်းပါပဲ။ ဆက်ရန်ကို မျှော်နေပါမယ်။
ဟာ ဒီလိုမှန်းသိရင် လာကူတွန်းပေးပါတယ် !
ဘော်ဒါတွေကို သံယောဇဉ်ကြီးတယ်ဆိုပြန်တော့ ကားပျက်လို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ ပုံစံကိုတောင် မြင်ယောင်နေမိတယ်... စောစောထဲကြိုသိရင် လာဝိုင်းတွန်းပေးပါတယ်လို့... ဟီးးး နောက်တစ်ခါ G-talk မှာ တွေ့လို့ ဒီက အရင်နှုတ်ဆက်ရင် စကားများတယ်လို့ ပြောမလားပဲ????
နေမကောင်းလို့ ကားတွန်းခိုင်းမှာစိုးလို့ ခုမှလာတယ်
ကားက ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ ထိုးမရပ်ဘူးပေါ့
နေ့စဉ်ဒိုင်ယာရီလို သဘောမျိုးလဲ ဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အာပေးနေပါတယ်။
ပန်းရောင်ကောင်မလေးဆိုတာ ... ရှင်းပြအုန်း
၀ိုးတ၀ါးနဲ့ လုပ်မသွားနဲ့အုန်း။ မရိုးတာတော့ မရိုးသားတော့တာ အမှန်ပါ...